Laba sawir oo dhab ah oo dhab ah Samsung Galaxy S7 edge | Androidsis
Ilaha sawirka xaday sida @evleaks ayaa maalmahan shaqooyin badan wata oo shaashadaha shaashadda si lama filaan ah ugu soo baxayaan sanduuqyada, si dhab ahna uma oga cidda soo saari karta wararkaas. Qaar baa bixiya oo sawirro dhab ah Taasi waxay ka dhigan tahay in qayb ka mid ah waxyaabaha uu ka kooban yahay taleefanka casriga ah ee awood u yeelan doona inuu qiiro geliyo malaayiin isticmaaleyaal ah ama midka cusub ee isku daya inuu soo ceshado khasaarihii soo gaadhay sanadihii hore ayaa la soo saari karaa sida ku dhacda shirkad gaar ah oo aan ka ogaanno Taiwan. Noocyada noocan ah ee daadinta waxay si aad ah ugu kordhayaan xiisaha taleefannadan cusub oo kuwa wax soo saara ay malaayiin doolar ku bixiyaan suuqgeynta iyo soo saarista.
Mid ka mid ah kuwa soo muuqday saacado kahor ayaa ah mid laxiriira magaca cusub ee Samsung Galaxy S7 gees kaas oo Axada lasoo bandhigi doono agaasimaha guud ee Samsung. Laga soo bilaabo terminal-kan gaarka ah ee shaashaddaada ku yaal geeska labaad, warka ayaynu haysanay in yar ka hor taasi waxay noqon doontaa tan ugu cajaa'ibka badan, maadaama ay laba jibaarantay tirada pixels ee laga heli doono gudigan. Shaandhayntan waxaan ku haynaa laba sawir oo dhab ah oo Samsung Galaxy S7 gees ah kaas oo maalmo ka hor sameyn doona kulankiisii ​​ugu horreeyay. Laba sawir oo noo muujinaya qaab kale oo S7 gees ah oo aan awoodnay inaan ka soo uruurinno wiiggan dhammaadkiisii ​​xallinta sare ee muujineysa dhammaan cabbirkeeda.
1 Samsung Galaxy S7 gees, taleefanka gooladaha
2 Laba sawir oo raadadkooda wata
Samsung Galaxy S7 gees, taleefanka gooladaha
Labadan sawir ee cusub isla dareenkaas ayaa soo noqonaya marka maskaxda lagu hayo Galaxy S7, waana kuwan qaar ka mid ah oo ku khasban inay sameeyaan gooladaha. Waxaan u maleynayaa inay tahay fikrad aad u wanaagsan in Samsung ay dooneysay inay xoojiso macnaha xargaha xarunteeda cusub, maxaa yeelay waxay ahayd mid ka mid ah layaabkeedii sanadkii hore markii ay bilawday Samsung Galaxy S6 gees, taas oo dhinacaas uu lahaa dhammaad aad u qaloocan. - qaas ah oo taasna waxay u ekaatay casriga casriga ah. Qof kasta oo gacanta ku hayey xaqiiqdii wuu ogyahay waxa aan ula jeedo.
Hadda hadda waxaan ku darnaa qaar geesaha wareegsan ah oo bixiya astaamo badan oo ku dhow qalooc, Waxaan wajaheynaa taleefan casri ah oo Samsung ah oo ka dhigaya ku dhowaad qaanso leexashada. Isbeddel ayaa sidoo kale lagu calaamadeeyay iphone iphone oo ay Samsung uruuriso si ay u keento telefoonnadeeda kuwa ugu caansan, sida kuwa ay ku soo bandhigi doonto shirweynaha adduunka ee Mobile-ka ee magaalada Barcelona.
Waxaan dhihi karnaa in qalooca uu ku jiro mood iyo hubaal inaanan ku sii nagaan doonin labadan magac si sanadka oo dhan mid kale u muuqdo inuu bilaabayo terminaal la jaan qaadaya geesahaas soo koobay Galaxy S7 iyo iPhone 6.
Laba sawir oo raadadkooda wata
Hadaad rabto inaad cadeyso inuu taleefankani leeyahay shidma farahaMaxay ka fiican tahay in la muujiyo raadadka qaarkood oo muujinaya astaamahooda sida is-dhexgalka cunsurkan uu u muuqdo, taas oo lama huraan u ah isticmaaleyaal badan oo ogaaday in ay aad ugu habboon tahay in taleefanka lagu furo sidan.
Labada sawir waa dhab oo marka laga reebo astaamahaas faraha laga qaado xitaa waan arki karnaa milicsiga qofka iyaga qaada. Waxay si fiican u muujinayaan sida qallooca casriga ah u yahay iyo sida badhanka guriga waxyar uga weyn yahay kii hore. Qaabkan ayaa sidoo kale loo qaatay in taleefanku awoodi doono inuu si dhakhso leh oo sax ah u ogaan karo faraha.
Faa'iidada kale ee keydinta taleefankan, ugu yaraan halkan Yurub, ayaa ah dheeri Soo qaado Qalabka Xaqiiqda Virtual Gear VR bilaash, sidaa darteed kuwa doonaya inay ku raaxaystaan ​​nooc kale oo waayo-aragnimo firaaqo ah, hubaal ma aha wax aad u xun in la iibsado ka hor inta aan calaamaddan cusub ee Samsung suuqa oolin.
Tallaabo kale oo la qaaday ka hor imaatinka Galaxy S7 iyo wararkaas oo ay noqon doonto wax yar oo kale oo aan siino maalmahan yar ee aan uga tagnay inaan ka ogaano Barcelona waxa ka dhici doona Shirka Caalamiga ah ee Mobile-ka ee gacanta Samsung.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Laba sawir cusub oo dhab ah oo Samsung Galaxy S7 gees ah ayaa la sifeeyey